कथाहरु को प्रकार: कति वर्गीकरण त्यहाँ छन् र ती के हुन् | वर्तमान साहित्य
कथाहरु को प्रकार
कथाहरु मा सोच लगभग सधैं एक बाल दर्शक संग सम्बन्धित छ। जे होस्, यो केस हुनु हुँदैन किनकि त्यहाँ धेरै छन् कथाहरु को प्रकार। ती मध्ये केहि वयस्क दर्शकहरु मा केन्द्रित छन्, जबकि अन्य, अधिक बचकाना विषयहरु संग, बच्चाहरु को लागी हुनेछ।
तर कस्ता प्रकारका कथाहरु छन्? ती मध्ये प्रत्येक को बारे मा के हो? यदि तपाइँको जिज्ञासा तपाइँ piqued छ, तब हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं।
1 कथा के हो?
2 कस्ता प्रकारका कथाहरु छन्?
2.1 दन्तिये कथा
2.2 पशु कथाहरु
2.3 भन्सार को कथाहरु
2.8 कमेडी को
2.9 इतिहास को
2.12 विज्ञान कथा को
3 के एक कथा एक प category्क्ति वा अर्को मा पतन बनाउँछ
कथा के हो?
एक कहानी एक लघुकथा को रूप मा परिभाषित गरिएको छ, जो वास्तविक घटनाहरु मा आधारित हुन सक्छ वा हुन सक्दैन, र जसका पात्रहरु कम हुन्छन्। यी कथाहरु को तर्क धेरै सरल छ र मौखिक वा लिखित माध्यम बाट भन्न सकिन्छ। यो मा, कथा को पहलुहरु वास्तविक घटनाहरु संग मिश्रित छन्, र यो एक कहानी सुनाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ तर बच्चाहरु लाई मूल्यहरु, नैतिकता, आदि जान्न को लागी पनि प्रयोग गरीन्छ।
La कथा को संरचना तीन भाग मा आधारित छ राम्रो संग ती सबै मा परिभाषित:
एक परिचय, जहाँ पात्रहरु लाई पेश गरीन्छ र उनीहरु संग एक समस्या को लागी पेश गरीन्छ।
एउटा गाँठ, जहाँ पात्रहरु समस्या मा डुबेका छन् किनभने केहि भएको छ कि परिचय मा जस्तै सुन्दर हुन बाट सबै कुरा लाई रोक्छ।
एउटा नतिजा, जुन तब हुन्छ जब एक समाधान को लागी त्यो समस्या को लागी क्रम मा एक सुखद अन्त्य गर्न को लागी भेटिन्छ, जो शुरुवात जस्तै हुन सक्छ।
कस्ता प्रकारका कथाहरु छन्?
हामी तपाइँलाई बताउन सक्दैनौं कि त्यहाँ कथाहरु को प्रकार को एक एकल वर्गीकरण छ कि अस्तित्व मा छ, किनकि त्यहाँ लेखकहरु छन् जो उनीहरुलाई अरु भन्दा धेरै संख्या मा वर्गीकृत गर्दछन्। उदाहरण को लागी, जोसे मारिया मेरिनो द्वारा "एक लोकप्रिय कथा बाट एक साहित्यिक कथा" को व्याख्यान को अनुसार, कथाहरु को दुई प्रकार छन्:
लोकप्रिय कथा। यो एक परम्परागत कथा हो जहाँ केहि पात्रहरुको कहानी प्रस्तुत छ। यो, बारी मा, परी कथाहरु, जनावरहरु, दन्त्यकथा र भन्सार को कथाहरु मा विभाजित छ। यसबाहेक, ती सबै संग मिलन मिथकहरु र किंवदन्तीहरु हुनेछन्, यद्यपि उनीहरु लोकप्रिय कथा को विभाजन भित्र शामिल हुनेछैनन्।
साहित्यिक कथा: त्यो काम हो कि लेखन को माध्यम बाट प्रसारित हुन्छ। सबैभन्दा पुरानो संरक्षित मध्ये एक एल conde Lucanor, डोन जुआन म्यानुअल द्वारा लिखित विभिन्न मूल बाट 51 कथाहरु को एक रचना हो। यो यथार्थवादी कथाहरु, रहस्य, ऐतिहासिक, रोमान्टिक, पुलिस, कल्पना पछि, हामी एक ठूलो विभाजन पाउन सक्छौं कि यस महान श्रेणी भित्र छ ...
अन्य लेखकहरु यो वर्गीकरण देख्दैनन् र विचार गर्नुहोस् कि उपविभाग वास्तव मा कथाहरु को प्रकार हो जुन अवस्थित छ। यस प्रकार, सबैभन्दा प्रमुख हुनेछ:
यो लोकप्रिय कथाहरु को बीच मा परिभाषित गरिनेछ, सबैभन्दा पढीएको र एक कथा हो कि वास्तविक छैन, जुन अज्ञात समय र ठाउँ मा हुन्छ र त्यो एक परीक्षण छ कि सुखद अन्त सम्म पुग्न को लागी पराजित हुनु पर्छ।
उनीहरु मा नायक मान्छे हैन, तर जनावरहरु जसको मानव व्यक्तित्व छ। कहिलेकाहीँ जनावरहरु मानिसहरु संग हुन सक्छन्, तर यी पृष्ठभूमि मा कार्य गर्दछ।
भन्सार को कथाहरु
ती कथाहरु हो जहाँ तपाइँ समाज को आलोचना गर्न चाहानुहुन्छ वा समय जसमा कथा भनिएको छ, कहिले काहिँ व्यंग्य वा हास्य को माध्यम बाट।
उनीहरुलाई साहित्यिक कथाहरु मा समावेश गरिनेछ, तर धेरै लाई विश्वास छ कि उनीहरु पनि लोकप्रिय कथाहरु हुन सक्छन्। यस अवस्थामा, कथा आविष्कार गरिएको केहि मा आधारित छ जहाँ जादू, जादू र पात्रहरु शक्तिहरु देखा पर्छन्।
तिनीहरू ती हुन् जो दिन दिन देखि दृश्यहरु बताउँछन्, जसको साथ बच्चाहरु आफैंलाई पहिचान गर्न सक्छन्, र यस तरीकाले, सिक्न।
उनीहरु यो चाहान्छन् कि पाठक कथामा त्यस्तो तरीकाले जोडिएको छ कि उनी लगभग कथाको नायक जस्तै जीवन बिताउँछन्।
अघिल्लो को विपरीत, जहाँ षड्यन्त्र खोजिएको छ, यहाँ यो डर हो कि साजिश को विशेषता हुनेछ। तर यो यो पनि हो कि पाठक नायक को रूप मा उस्तै अनुभव गर्दछ, कि डराएको छ र आतंक को कथा मा वर्णन गरीएको छ।
तपाइँको लक्ष्य एक प्रस्तुत गर्न को लागी हो रमाईलो कथा जसले पाठकलाई हँसाउँछ, चाहे चुटकुले, हास्यास्पद परिस्थितिहरु, अनाड़ी पात्रहरु, आदि को माध्यम बाट।
यो यति धेरै एक ऐतिहासिक तथ्य को व्याख्या छैन, तर बरु उनीहरु त्यो वास्तविक तथ्य को उपयोग गर्न को लागी पात्रहरु र समय र ठाउँ को पता लगाउन को लागी, तर उनीहरु लाई वास्तविकता को लागी वफादार हुनु पर्दैन।
उदाहरण को लागी, यो एक दिन लियोनार्डो दा भिन्ची को बारे मा एक कथा हुन सक्छ जब उनले चित्रकला बाट एक ब्रेक लिए। यो ज्ञात छ कि चरित्र अस्तित्वमा छ र कथा त्यो अन्तरिक्ष-समय मा स्थित छ, तर यो केहि हुन सक्दैन कि साँच्चै भयो।
यी कथाहरु को आधार एक कहानी हो जसमा मुख्य विषय दुई पात्रहरु को बीच प्रेम हो।
उनीहरुमा कथानक एक अपराध, एक अपराध वा एक समस्या स्पष्ट गर्न मा आधारित छ पात्रहरु को माध्यम बाट जो पुलिस वा जासूस हुन्।
विज्ञान कथा को
उनीहरु ती हुन् जो भविष्य वा वर्तमान मा अवस्थित छन् तर धेरै उन्नत टेक्नोलोजी प्रगति संग (जुन अझै सम्म वास्तविक जीवन मा अवस्थित छैन)।
के एक कथा एक प category्क्ति वा अर्को मा पतन बनाउँछ
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको छोरा वा छोरी, तपाइँको भतीजा वा भतीजी को लागी एक कथा सुनाउन जाँदै हुनुहुन्छ ... यसको सट्टामा एउटा किताब उठाउन र उनीहरुलाई पढ्न को लागी, तपाइँ यसलाई बनाएर कहानी सुनाउन थाल्नुहुन्छ। वा एक कि तपाइँ पहिले नै थाहा छ बयान। माथिको वर्गीकरण को आधार मा, यो एक लोक कथा हुन सक्छ यदि यो ती लोक कथाहरु को केहि उप -विभाजन संग सम्बन्धित छ।
अर्कोतिर, यदि तपाइँ के गर्नुहुन्छ कथाहरु को एक किताब पढ्नुहुन्छ, यो साहित्यिक क्षेत्र भित्र आउनेछ, किनकि यो लेखन को माध्यम बाट प्रसारित हुने छ।
वास्तवमा जब एक कथा वर्गीकृत, यो धेरै तरिकामा गर्न सकिन्छ:
चाहे यो वर्णन गरीएको हो वा पढिएको हो (लिखित)।
चाहे यो शानदार हो, परियों, एक दन्त्यकथा, पुलिस अधिकारीहरु, एक जोडी ...
केहि पनि कथाहरु दुई वा बढी कोटिहरु मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ जब बाट यो सूचीकरण को समय मा, यो क्यारेक्टर अनुसार वा साजिश को अनुसार गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि पात्रहरु जनावरहरु हुन् कि मानव सुविधाहरु छन् (उनीहरु बोल्छन्, कारण, आदि)। हामी जनावरहरु को एक कथा को सामना गरिनेछ। तर के हुन्छ यदि ती पात्रहरु जंगल मा एक डकैती को जांच जासूस थिए? हामी पहिले नै एक पुलिस बच्चाहरु को कथा मा प्राप्त गर्दैछौं।
एक किताब वर्गीकृत गर्न चाहने लाई यति धेरै महत्व नदिनुहोस्। केवल प्रकाशकहरु उनीहरुलाई वर्गीकृत गर्दछन् र उनीहरुका किताबहरुको सूची मा एक "अर्डर" राख्न को लागी, साथै थाहा पाउन को लागी कि उनीहरु लाई कुन किताबहरु प्रकाशित गर्नु पर्छ र जो उनीहरुलाई हुँदैन। तर जब यो पाठकहरु को बारे मा सोच्न को लागी आउँछ, उनीहरु आफ्नो स्वाद को आधार मा कथाहरु पढ्छन्, विधाहरु मिश्रण गर्न को लागी सक्षम छन् र, यस प्रकार, उनीहरुलाई आश्चर्य गर्न को लागी अधिक मौलिक हुन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » कथाहरु को प्रकार
किताबहरु को प्रकार